Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 wararka maanta-arlaadii.net » Darawal Muda u Xirnaa Ciidamada Dawlada Tacsina loo dhigay oo Dib loo Helay Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284
Degmada Afgooye ee Gobolka Shabellaha hoose, ayaa waxaa ka dhacday arrin la yaab leh, kadib markii ciidamada dowladda ay afduubteen nin darawal ahaa, kaasi oo muddo 15 cisho la la’aa.
Ninkaan darawalka ayaa watay gaari caasi ah oo ka shaqeeya Degmada Afgooye, waxaana qabtay ciidamo ka tirsan Militariga dowladda oo lugaha iyo gacmaha ka xiray, kadibna geeyay guri ku yaallo Degmada Afgooye.
Gaarigii caasiga ahaa ayeey ciidamada iska wateen, danahooda gaarka ahna ku qabsan jireen, iyadoo reerka ninka darawalka ay ka quusteen wiilkooda meel kasta oo ay ka raadiyeen.
Saldhiga Degmada Afgooye ayey ku wargeliyeen arrintaasi, waxaana Saraakiisha ciidamada ay u sheegeen inaysan arkin ninka noocaasi ah oo xabsiga uusan ku xirnayn.
Reerka Darawalka dhalay ayaa ka quustay wiilkooda, waxayna u tiriyeen inuu dhintay iyaga oo tacsi u dhigay, xaaskii uu qabayna asaay loo saaray.
Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dhacday Milkiilaha gaariga oo lagu magacaabo C/wali Maxamuud inuu arkay gaarigiisa oo ay wataan ciidamo Militari ah, loona isticmaalo sida gaari ciidan oo kale.
Arrintii ayuu dabagal ku sameeyay, waxaana ugu dambeyn uu soo helay xogta ku saabsan darawalka gaariga inuusan dhiman ee guri ku yaallo Degmada Afgooye uu ku xiran yahay, islamarkaana ciidamada gaariga wata ay xireen.
Ninka Darawalka ahaa oo xir xiran ayaa laga soo helay guri ku yaallo Degmada Afgooye, waxaana sidaasi reerkii uga baaba’day murugadii iyo tacsidii ay u dhigeen Darawalkii la waysanaa 15-ka Maalin oo lagu magacaabo Daafeedow.
Ugu dambeyn Milkiilaha gaariga ayaa ka dalbaday Dowladda Federalka Somaliya arrintaan si deg deg ah wax in looga qabto.